Yakanakisisa IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) Mugaba we40-foot Manufacturer uye Factory | BTCE
VTN HTN Series Yakamisikidzwa...
Trailer Tangi yeCryogenic ...
Vertical Super Hombe Storage...
IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) Mugaba we40-tsoka
BTCE IMDG midziyo yakagadzirirwa kutakura LOX, LIN, LAR, LNG, LCO2, LN2O, inogona kutakurwa nechikepe, njanji uye mugwagwa. Iwo midziyo anowanikwa ISO 20 tsoka uye ISO 40 tsoka ine super insulation.
BTCE IMDG midziyo yakagadzirirwa kutakura LNG, LC2H2, LC3H6 inogona kutakurwa nechikepe, njanji uye mugwagwa. Iyo midziyo inowanikwa ISO 40-tsoka ine super insulation.
■ Yakasarudzika yemukati dhizaini dhizaini, yakasarudzika thermal insulation performance, kutakura kureba;
■ Docking isina musono ine chassis yakajairwa;
■ Kubvisa maparameter akasiyana, kuderedza mutengo wekushanda nekuvandudza kushanda zvakanaka;
■ GB, ASME, AS1210, EN13530 uye mamwe maitiro akakodzera epamba nekunze ane vhoriyamu yakakura uye huremu hwakaderera, nyore kushanda;
■ Teerera IMDG, ADR, RID uye zvimwe zvinodiwa pasi rose zvakakodzera kutakurwa kwemultimode pasi rose;
∎ Iyo BV, CCS kana zvimwe zvinodiwa pakuongorora nekupihwa zvitupa.
■ Ivhavha yekushanda system inokwana mukugadzirwa, iri nyore kushanda nekuchengetedza, uye yakagadzirwa nemunhu mukugadzira;
■ Huwandu hwezvakagadzirwa patent application muzvigadzirwa zvemarata ebhokisi, senge high voltage equipment yakavharwa chubhu patent no. : ZL 2020 2 2029813.7
Model Gross Volume(m3) Uremu hweTare (kg) Max .Gross huremu (kg) Urefu (mm) Upamhi (mm) Urefu(mm) MAWP(MPa)
Yakakosha dhizaini inowanikwa kune ese mamodheru pachikumbiro chakakosha. Dhizaini uye yakatarwa inogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga.
Iwo matangi eLNG ekambani yedu anoratidzirwa neakasiyana-siyana ekufambisa modhi uye yakasimba kuendesa kuchinjika, iyo inogona kukwidziridzwa kune njanji, mugwagwa mukuru, nzira yemvura uye mamwe minda yekufambisa, nekuona "gonhi nesuo" gasi rekupa pakati pekugamuchira zviteshi uye kupera. vashandisi, uye kuvhura inochinjika yekuendesa modhi yediki uye yepakati-saizi LNG yekutengeserana yekunze.
Panyaya yekuchengeteka, LNG tank chigadziko chinogadzirwa nekambani yedu chakaedzwa nenyanzvi dzemasangano kwenguva dzakawanda. Chimiro chese chakasimba uye chakavimbika, uye mvura iri mutangi haizove nekubuda kwemhepo mukati memazuva makumi mapfumbamwe, iyo inogona kunyatso kudzikisa njodzi yekutakura kwechinyakare uye nekuvandudza zvakanyanya kufambisa kwekufambisa.
Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. ine timu yehunyanzvi yevanhu makumi matatu, iyo inogona yakazvimirira kupedzisa chigadzirwa dhizaini ye cryogenic pressure ngarava senge matangi, pamwe neanogumisira ekuongorora uye dhizaini, tembiricha mutsauko kushushikana, pombi yekupisa yekushushikana kushushikana. , 3D modeling, magetsi ekugadzira uye mamwe mabasa. Vanoda kusvika makumi maviri ehunyanzvi uye ekuongorora vashandi vanga vachishanda kweanopfuura makore gumi. Uye ane hukama hwakanaka neCCS, BV, DNV, ABS, LR uye mamwe mapoka emapoka.
Kambani yedu ine nyanzvi yekugadzira tangi yekugadzira mutsara, iyo inogona kugadzira nekugadzira makumi mana-tsoka LNG matangi zvigadzirwa zvine gore negore kuburitsa kweanopfuura zviuru mazana maviri seti. Zvichakadaro, kuti isangane nezvinodiwa nevashandisi vepasirese, kambani yedu inopa inoenderana yakajairwa LNG tank zvigadzirwa zvevatengi mumatunhu akasiyana, uye inomisikidza mushure mekutengesa sevhisi pasi rese. Kuve nechokwadi chekuti vatengi munguva yekutanga kuwana mushure mekutengesa sevhisi kuchengetedzwa. Tichapa sevhisi yakanakisa yekuzadzisa zvese zvaunoda!
Inoyerera chati ye40 'LNG tank
Nhamba huru ye40-tsoka LNG matangi akatumirwa kune kunze kwenyika kutakurwa kweLNG
40-foot LNG tank inogamuchira LNG refueling pane LNG terminal muJapan
Iyo 40-foot LNG tangi yakagadzirira ngarava munzvimbo ye tank tank
Zvakapfuura: VTC/HTC Series Yakamisikidzwa CO2 Kuchengeta Matangi
Zvinotevera: LNG ( Liquid Natural Gas ) Mafuta eMatangi eChikepe